အခုတော့ဒူဘိုင်းစီးတီးဧရိယာအံ့သြဖွယ်သောနေရာများရှိခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်အတွက်လည်းလူသိများသည် ဒူဘိုင်းမြို့ဓာတ်ပုံများကို နှင့် ရာထူး အမှန်တကယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများမှချစ်ကြလိမ့်မည် အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ အဲဒီမှာ။ တကယ်တော့, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အက်ဘ်ဆိုက် ဧကန်အမှန်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအနှစ်သာရထဲမှာအကျဉ်းချုပ်, စုဆောင်းမှုအတွက်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်နှင့် ဒူဘိုင်းတွင်အလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်အလုပ်လျှောက်လွှာ.
ယေဘုယျအားဖြင့်လစဉ်လတိုင်းစကားပြော ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူများ ရသောအခါ၎င်းတို့သည်ငရဲ၌ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်ဖြုန်း ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေးပြုပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ဥပမာကိုရှာဖွေဘို့ လစာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ မြို့။ သင်သည်ငါ၏လုပ်ဘော်ဆောင်ဘက်မိတ်ဆွေတစ်ဖြစ်ကြပြီးဒီစော်ဘွားရန်သင့်တတိယခရီးစဉ်ခဲ့မိလျှင်, ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ဝတ်ရန်။ ငါသည်သင်တို့ကို WhatsApp ကို Group မှစတင်သုံးစွဲမဟုတ်လျှင်သူကခဲယဉ်းသည်ပထမဦးဆုံးမှာသငျသညျဆိုသညျကားရန်ရှိသည်။
ကြောင်းရှင်းလင်းထားသည့်အာရုံနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ သူတို့ပေးဆောင်ရွက်ရာဘို့ပိုက်ဆံရတဲ့နေကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပိုငျသညျပိုပျော်စရာ, သိရန်လိုအပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများ သငျသညျတှေ့လိမျ့မညျ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့တူသီးခြားသောနေရာများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယူပါလိမ့်မယ် ပင်ဒူဘိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အချိန်အားထုတ်မှု နှင့်ဧညျ့အလုပ်အကိုင်များသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ဟာမတ်လမ်းရိုးရှင်းဖြစ်ပါသည်: ယခု app ကို Download လုပ်ပါ! မှ တာဝန်ရှိသူတဦးကဒူဘိုင်း Careers က်ဘ်ဆိုက်။ အတိအကျ ဒူဘိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အသစ်နှင့်သင်တစ်ဦး အလုပ်ရှာဖွေသူ ရှာဖွေကာတစ်မိနစ်ထက်လျော့နည်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားရန်အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, သင်မှမရေမတွက်နိုင်သောနာရီပေါင်းများစွာလိမ့်မယ်ကြောင့်, ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများသည်ကိုရှာဖွေရန်။ အစိုးရ 35 + အဖွဲ့အစည်းများထံမှသင်တို့ထူးခြားသင်ထင်ထက်အများကြီးပိုခံယူနိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်း Careers အောင်မြင်မှုဆီသို့ဦးတည်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်
သင်တို့ရှေ့မှနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် သွားနှင့် ရှာဖှေ ဘို့ အလုပ်တွင်ကျယ်စွာအတွက် ဒူဘိုင်း သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုစာရင်းပြုမှအတုပြုလုပ်မယ့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ။ over-the-ထိပ်တန်းခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်နှင့်အဘို့အထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူး အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သဲကန္တာရအလယ်၌တစ်ဦးခေတ်မီလေအေးပေးစက်မြို့အဘို့ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဥပမာအဘို့, ဒူဘိုင်းရှိအခြို့အချိန်ဖြုန်း သို့မဟုတ်အဘူဒါဘီကြောင့်စိတ်ပျက်သတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ထပ် key ကိုအမှတ် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် အဖြစ်အပျက် မွို့၌နထေိုငျနှငျ့သငျမှရှင်းပြနိုင်သူသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒေသခံတစ်ဦးကစျေးကွက်အတွင်းအလုပ်လျှောက်လွှာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လို။ အဲဒီမှာအပြုသဘောဘက်တွင်သင်သည်အတွက်7စော်ဘွားများ ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ။ ကိုယ့်အလုပ်ရှာဖွေနေဆွဲဆောင်မှုချိတ်ဆက်ထက်ကအများကြီးပိုကြည့်ရှုပါနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းဖို့ CV ကိုပို့ပါ။ သငျသညျဝနျခံဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုအနှစ်ချုပ်ရန်ပြုလုပ်သဖြင့်အံ့သြဖွယ်စမတ်ကိုဖန်ဆင်းသောမြို့ဖြစ်၏ မြင့်ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum သင်တစ်ဦးသည်အလွန်အဆင်ပြေဘဝကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်းဘယ်မှာ! နှင့်အီးမေးလ်ဖြင့်သူ၏ဖွဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
တစ်ဦးကဒါကြောင့်နည်းနည်း ဒူဘိုင်းမြို့နှင့် Sharjah အကြောင်းကို။ ကျိန်းသေ, ကသာ 50 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသေးငယ်တဲ့သဲကန္တာရမြို့ကြီးရှိနေတဲ့အလွန်အမင်းနည်းပညာအဆင့်မြင့်မြို့တော်သို့တီထွင်ခဲ့သည်။ ရန်စီးပွားရေးနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ Focal Point သည်ကြောင်းကိုအကျဉ်းခုနှစ်တွင် ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက် နှင့်အများဆုံးနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကထွက်ရှာတွေ့ 2018- 2019 အတွက်လူကြိုက်များခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာနှင့်စုဆောင်းမှု။ အဆိုပါ 1960s နှင့် 1970s အတွက်အများဆုံးရုပ်ပုံဘို့, အနှစ်သာရအတွက်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကန္တာရဖှံ့ဖွိုးတိုးတအဖြစ်သင်မြို့ကိုပြသချင်ပါတယ်: Deira ၏ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက် Clocktower အဝိုင်းတွင်သဲများကဝိုင်းရံကိုဆိုလိုတာပါ။ သင်ပင်ဤအရပ်ဌာနကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်သလား ?.
ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာရုံမက အလုပ်ရှာဖွေလိုရာခရီးကကောင်းစွာအထူးသဖြင့်ဇိမ်ခံစျေးဝယ်များအတွက်လူသိများသည်, ထိုအံ့သြဖွယ်ရာအရပျ၏အမြိုးသမီးမြားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ခေတ်သစ်ဗိသုကာနှင့်သွက်တွေကတော့မြင်ကွင်းတစ်ခု။ ယင်း၏ 830m နှင့်အတူအံ့သြဖွယ် Burj Khalifa, ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦ, အမိုးမျှော်တိုက်-ဖြည့် skyline လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ဈေးကွက် နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်ဖို့စီးပွားရေးကိုမောင်းနှင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ်-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှခံရဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပုံရသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ကောင်းစွာကျော်ကြားမှုနှင့်အတူ paid စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာထဲမှာ ဆန်းသစ်နှင့် over-the-ထိပ်တန်းယူအေအီး WhatsApp ကိုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုမှန်းချက်ရဲ့။
ထို့ကြောင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဖွင့်အချို့အားမျှဝေချင်ခဲ့တယ် အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအံ့သြဖွယ်အရူးဖြစ်ရပ်မှန်များ။ အဖြစ်ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်နှင့်မည်သို့မည်ပုံဤမြို့၌အနည်းငယ်ဒူဘိုင်းမေတ္တာတော်ကိုပြန့်နှံ့ရန်။ သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလည်းထွက်ရှာတှေ့နိုငျ ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှ။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပိုငျးပိုငျးမှာကြည့်ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျကိုလည်းငှားရမ်းကုမ္ပဏီများသည်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ Careerjet ဒူဘိုင်းငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် နှင့် အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုယူပြီးနဂါးပင်လယ်ကွေ့စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
အံ့သြဖွယ်ဟိုတယ်အဆိုပါ Burj Al Arab
အဆိုပါဟိုတယ်ကို Mona Lisa ကို 46,265 ကြိမ်ပန်းချီကိုဖုံးလွှမ်းရန်လုံလောက်သောရွှေကိုအသုံးပြုသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် နှင့်အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုအထောက်အထား Burj Al Arab ၏အတွင်းပိုင်းသည်။ ဤသည်ဟိုတယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌လူသိများကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါသည် ဗေီဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း. အာရပ်ဧညျ့ဂျော့ဘ်, သင်ယူအေအီးကိုသွားပါလိမ့်မယ်လျှင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, အတန်ငယ်တစ်ခုလွှမ်းမိုးသောအတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ 1,790-ကာရက်ရွှေအရွက်၏ပတ်ပတ်လည် 24 စတုရန်းမီတာနှင့်အတူအလှဆင်။ ရွှေအကြောင်းငွေပမာဏနှင့်အတူ, သငျသညျ 46,265 Mona Lisa ကိုပန်းချီကားများကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ဘူး။ ဒူဘိုင်းဟိုတယ် Burj Al Arab အတွက်ဂျော့ဘ်.
ကမ်ဘာပျေါတှငျတိုင်း4ရိန်းထဲကတစ်ခုမှာဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်တည်ရှိပြီး
ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ ဆဲစူပါအစာရှောင်လမ်းအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ 32,000 ဆောက်လုပ်ရေးရိန်းထက်ပိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစာရှောင်သည်ဟုအကြမ်းဖျင်း 24-28 အားလုံးရိန်းရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း ထဲမှာတည်ရှိပါတယ် ယူအေအီး.
Burj Khalifa လွန်း Jumeirah သဲသောင်ပြင်ကနေ
ဒူဘိုင်းရှိ Marina ရန်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကျွန်း။ ဒူဘိုင်းစျေးဝယ် Fiesta ရန်။ ဒူဘိုင်းခရီးသွားများဆွဲဆောင်ရန်ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်။ သငျသညျဆောက်လုပ်ရေးစွန်ပလွံကျွန်းများပေါ်တွင် 2001 စတင်ခဲ့ပြီးသဲသာ 94 သန်းကုဗမီတာလိုအပ်ဒူဘိုင်းရဲ့အုန်းကျွန်းဆောက်လုပ်သည်ကိုသင်တို့သိသလား? အဲဒီအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဦးအလုပ်ရှာတွေ့ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများမှ။ စွန်ပလွံကျွန်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ပင်လယ်ကိုကြမ်းပြင်ကနေ dredged သဲထံမှဆောက်လုပ်ထားကြသည်။ အဆိုပါအချက်မကြာခဏအုန်း Jumeirah 3,257,212,970.389 ကုဗထံမှဖန်ဆင်းထားသည်သတိမမူ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ခွထောကျ သမုဒ္ဒရာသဲ vibro-compacted တဦးတည်းအံ့သြဖွယ်ရာအရပ်သို့ [အရင်းအမြစ်: အဆိုပါအုန်း Jumeirah] ။ အထူးသဖြင့် Vibro-သိပ်သည်းဂျက်လေယာဉ်နှင့်အခြားရေအားကစားနှင့်အတူက saturating နှင့်အရူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများကိုအတူကတုန်ခါခြင်းဖြင့်ချောင်သဲ၏သိပ်သည်းဆတိုးပွားစေပါသည်။ သငျသညျကိုကြှနျုပျတို့အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသိသလား
ယေဘုယျအားဖြင့်အကြောင်းကိုစကားပြော ဒူဘိုင်း စွန်ပလွံ Jumeirah ပြီးသားကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံး Sheikh များ၏ထိပ်တွင်စျေးကြီး Villas နှင့်ခရီးသွားဧည့်အပြည့်အဝဟိုတယ်များနှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသည်။ တချို့အစောပိုင်းဝယ်လက်သူတို့ကိုဖန်တီးရန်ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်ထက်မကောင်းသောအကြံကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလှပတဲ့ဖြစ်ကြောင်း 2001- 2017 ထံမှစောဒကအတူ။
ရေရှည်မှာ, နိုင်ငံတကာဝယ်လက်ဥရောပ, သြစတြေးလျ, အိန္ဒိယနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအရောအနှောများမှာ ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ လာသောအခါတိုးတက်မြင့်မားလာစျေးနှုန်းများတွင်လက်ငင်းငွေချေရန်မျှော်လင့်နေထိုင်သူများ, အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စျေးကစားဘို့အဘယ်သူထွက်ငှား ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဒါကြောင့်စတင်မည် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု CV ကို Upload လုပ်ပါ.
ကျွန်းပြီးစီးသောအခါရှိတ် Nakheel ဒေသခံများ 120,000 မှတက် 150,000 မျှော်မှန်းထားသည်။ အချို့သောထိပ်တန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ် VC ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ သူတို့တကယ်ယူအေအီးမှာ "fundable" စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ယူအေအီးနှင့်ကာတာနိုင်ငံအတွက်ရှာသောအရာကိုရှာဖွေ။ 20,000 ခရီးသွားဧည့်တစ်ရက်မှတက် 30,000 အဖြစ် Plus အားအဖြစ်အများအပြား။ အိန္ဒိယဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်း အဆိုပါအသေးစားနှင့်အနီးအပါးလင့်ချရန်ခရုဇ်သင်္ဘောပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့ ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ ဒီအံ့သြဖွယ်ကျွန်းကိုတည်ဆောက်စဉ်။ အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အအုံသာ 37 သန်းကုဗမီတာဖြစ်ပါတယ်။
တီဗီရှိုးကနေသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးလူတစ်ဦးထက် သာ. ကောင်း၏။ ဒါကြောင့် ဒူဘိုင်းရဲများပြိုင်ကားကားများကြည့်ကြ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုသင်တောင်ရေတွက်လို့ရပါတယ်သန်းပိုစူပါရှိထားသည်။ ကောင်းပြီ, အမှတ်တံဆိပ်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိပါတယ်ငါသိ၏။ ရဲကားရပ်နားဌာနအတွက်ရပ်ထားဒူဘိုင်းရဲများကစင်းကို၏ရုပ်ပုံ။
2001 ကတည်းကဒူဘိုင်းရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဘယ်လို "အလုပ်များ" ပြသနိုင်ဖို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှခရီးသွားဧည့်အထင်ကြီးဖို့သူတို့ရဲ့စူပါကိုအသုံးပြုသည် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောကျော် 700 မြင်းကောင်ရေအားအတူ Mercedes-Benz GL အဖြစ်ကားများပါဝင်သည် - Audi R8 ($ 280,000) Ferrari ပြိုင်ကား FF ($ 500,000), Lamborghini Aventador ($ 397,000) နှင့်တစ်ဦးစူပါအစာရှောင်ခြင်း Aston Martin One-77 ($ 1.99 သန်း) ။ သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျ Mercedes-Benz နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင် သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီထံမှပိုပြီး blog post: ဖတ်နိုင်သည်။
ဒူဘိုင်းရဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏အကြမ်းဖျင်း 80% နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှလာ
ရာခိုင်နှုန်း 17 န်းကျင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သကဲ့သို့ပင် ဒူဘိုင်းလူဦးရေရဲ့ဒူဘိုင်းမြို့မှာမွေးဖွားနေကြတယ်ရာခိုင်နှုန်းအခြား 83 နေစဉ် အိန္ဒိယကနေပြည်တော်ပြန်, ပါကစ္စတန်, ဥရောပ, နှင့်အခြားနိုင်ငံများမှ။ အလုပျသမားအမြားစုကလတ်ဆတ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူ ရှာနေကြသူ ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာအတွက်ဂျော့ဘ် ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအတွက်ဂျော့ဘ်ပေါ်တွင်လက်ရှိအချိန်အထိအလုပ်အကိုင်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 250,000 ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်ကိုကျော်ပေးခြင်းမိုးမျှော်တိုက်၏ဒူဘိုင်းရဲ့ရာပေါင်းများစွာကိုတည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်။
ဤအတောအတွင်းအဓိကကလူ အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ကနေအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုပြောင်းရွှေ့ ကောင်းသောလုပ်ခသည်။ အားလုံးပြီးနောက်ရလဒ်အဖြစ်ဤ ကျွမ်းကျင်သူများယူအေအီးနေထိုင်သူများဖြစ်လာ။ 1995 ကတည်းကသူတို့ 60 ကျော်ဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့လူဦးရေရဲ့% ပါဝင်နှင့်ဤအမှန်တကယ်ဒူဘိုင်းမြို့မှာ google အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်မုဆိုးများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့အောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျိန်းသေစစ်မှန်သောသို့မဟုတ်အဘယ်သူမျှမ Way ကို? ဒူဘိုင်းရှိလူများဒါကြွယ်ဝသောရှိပါသလဲ
စော်ဘွားအတွက်လူတန်းစားခွဲခြားသည့်များစွာသောအတူကြီးမားသောဖြစ်ပါသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ရှာနေကြသူရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ။ ယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်လူတန်းစားလုပ်သားများတစ်ရက် 12h မှတစ်ခါတစ်ရံ 16h နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်, စကားပြော။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအခွအေနအတွက်, စျေးကြီးပြားချပ်ချပ်ရဲ့နဲ့ရက်စွဲအစားအစာထဲကအစာစားခြင်း။ ချိန်ခွင်လျှာမွေးဖွားအပေါ်ဖြစ်နေချိန်မှာနှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှအဖြစ်မြင့်တက် သူတို့ရဲ့စျေးကြီးငှားရှိသည်, သူတို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်ပညာရေး နှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုလျင်မြန်စွာများအတွက်ပေးဆောင်နှင့်အထက်အတန်းအစားနေကြတယ် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုလုပ်ခဝင်ငွေအဘယ်သူသည်နိုင်ငံခြားသားများ.
အံ့သြဖွယ်ရုပ်ပုံရှိတ်မိုဟာမက် ဘင် Rashid
ဒုတိယသမ္မတများနှင့်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဒူဘိုင်း၏, သူ၏သားရှိတ် Hamdan, ဒူဘိုင်း၏အိမ်ရှေ့မင်းသား, လန်ဒန်ယူ မြေအောက်ခရီးစဉ်.
၏သိသာထင်ရှားတဲ့ကြီးမားတဲ့အများစု ဒူဘိုင်းမြို့ရှိလူများအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်အထူးသဖြင့်လူဦး။ တစ်လမှတစ်လကနေတိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ် minimize တစ်အိပ်ရာမျှဝေပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲခရီးသွားဧည့်များ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးသူတို့ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက်သောအခါမမြင်ရပါဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်ယူအေအီးအတွက်လူအများစုအရာဟူသောယုံကြည်ချက်များ သူတို့တစ်တွေပိုကောင်းအလုပ်ရှာတွေ့သည့်အခါပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့ကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေလျှင် ဒူဘိုင်းယောဘ ကဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။
Tube: Metro သို့မဟုတ်ဗြိတိန်တခါထဲ name ကိုအသုံးပြုခြင်း
ဥပမာအားဖြင့်, ယူမယ့်ကားတစ်စီးကိုသုံးပါနှင့်ဆုံးဖြတ်လျှင်မ Metro နှင့်ခရီးသွား 99% မှာသငျသညျဆက်ဆက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုမကျင့်လျှင်သော်လည်းကောင်းအမှု၌, အနံ့ကိုသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်လုပျနိုငျအဆိုးဆုံးကတော့ ?. လူထု ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှခရီးသွားလာ နှင့်ရန်ပုံငွေများကိုမျှအပြားမရှိ, ဆက်သွယ်မှု, ရိုးရှင်းသောဘာမျှမကန့်သတ်ထားရှိသည်။ ဒီလက်ငင်းမှာသူတို့ခဲ့သောအကောင်းဆုံး option ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဝင်ငွေအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာများနှင့်အမိုးအကာခဲ့ပေမယ့်မကောင်းတဲ့လမ်းတွင်နေထိုင်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက် ယူအေအီးနှင့် Start ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေး
မှ မြင့် ရှိတ်မိုဟာမက် ဘင် Rashid အယ်လ် Maktoum
ကိုဂုဏ်ပြုသော ထိပ်တန်းဖျော်ဖြေလုပ်ငန်းရှင်များယူအေအီး + အာရပ်ကမ္ဘာရှိ / စတင်။
ခ။ ၏အရေးပါမှုကိုပိုမိုအသိအမြင် Creating Dubai Mall အတွက်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု.
က c ။ သူတို့ရဲ့ပုံပြင်များနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဝေမျှဖို့လုပ်ငန်းရှင်များအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များအားပေးခြင်း။
ဃ။ ရန်ယူအေအီးရဲ့အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများများ၏စွမ်းရည်များကိုစတင်ရောင်းချ ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ။
အီး။ လင်းမြင်သာမှု, ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ခွဲဝေမှု၏ယဉ်ကျေးမှု Creating ။
Iဎ 2018 ဒူဘိုင်းစက်ရုပ်အစားထိုးနေကြပါတယ်
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိကုလားအုတ်ပြိုင်ကားအဘယ်အရာကိုဘောလုံးနဲ့ဆင်တူအလွန်လူကြိုက်များအားကစား, အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါမှဟော်ကီရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကုလားအုတ်ရဲ့အရွယ်အစားပေးထားသာသားသမီးများကသူတို့ကိုပြိုင်ကားများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အစား ခွင့်ပြုဒူဘိုင်းနေထိုင်သူများ '' ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ကလေးများ။ ကလေးများတရားမဝင်ကုလားအုပ်မျိုးနွယ်မှတိုင်းပြည်သို့လူကုန်ကူးရှိခြင်းနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာအဆိုပါ Lamborghini ကHuracánအစားကုလားအုပျ
ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာမန်နေဂျာအမြဲတမ်း Lamborghini ကHuracán LP သို့ 610-4 ထောက်ပြရန်ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆနှင့်အတူတက် လာ. အရောင်း Gallardo မှဆက်ခံမှာအဖြစ်မွှမ်းတင်။ ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာနောက်ဆုံးတွင်ကုလားအုပ်အရာကိစ္စအပေါ်ဖမ်းမိအသစ်တစ်ခုစိတ်ကူးအတူတက်ရောက်လေပြီ။ ယူအေအီးအတွက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်အဲဒါကိုရပ်တန့်ထားပါ။
အဆိုပါ Lamborghini ကကုန်ကျစရိတ်: $ 233,985 - (ခန့်မှန်းခြေ) $ 325,000
ဒူဘိုင်းအစိုးရဒူဘိုင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုနှင့်အတူတက်လာ။ စက်ရုပ်သို့မဟုတ်ပဲ Lamborghini ကမောင်းတယ်။ ကြောင်းစက်ရုပ်၏ကုန်ကျစရိတ် $ 500 အထိဘယ်နေရာမှာမဆို $ 10,000 ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဆီစားသက်သာ 9.0 - 19.6 ဌ / 100km ။ လည်း သငျသညျမွန်ဘိုင်းအတွက်အိန္ဒိယအတွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
ထိုပဲရစ်၏ 1.50 ကြိမ်အရွယ်အစားရှိလိမ့်မည်။ ဒါကပဲအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒူဘိုင်း, သင်ဥပမာတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, အင်ဒီးယန်းများနှင့်အီရန်နိုင်ငံသားလုပ်သားများ.
ကုန်စည်ပြပွဲဒူဘိုင်းမတိုင်မီအလုပ်ရှာဖွေရေး 2020 လုံးဝရာသီဥတုထိန်းချုပ်မြို့တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်နေသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ ဒူဘိုင်းမြို့လယ်အတွင်းရှိအမျိုးမျိုးသောသောအရပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားသောလေအေးပေးစက် boardwalks နှင့်အတူအရွယ်အစား 3.95 စတုရန်းကီလိုမီတာဖြစ်လိမ့်မည်။ ပဲရစ်ဥပမာ, သာ 1.02 စတုရန်းကီလိုမီတာ၏ဧရိယာရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်က google နိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ 2018 မျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာများရှိပါတယ်မရောက်မှီတိုင်အောင်,
ဒူဘိုင်းမြို့များတွင်မရှိဇစ် codes တွေကိုသို့မဟုတ်ပင်အဘယ်သူမျှမဧရိယာ codes တွေကိုနှင့်မျှမတို့စာတိုက် codes တွေကိုလည်းမရှိ !.
ယင်းကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများကြီးထွားလာအလုပ်အကိုင်များနှုန်းသည်ဒူဘိုင်း။ အဆိုပါမိုဘိုင်းစုဆောင်းမှုအလုပ်အကိုင်များစျေးကွက်ကြီးထွားလာသည်, တကစံလိပ်စာစနစ်အားမရှိပါ။ အဲဒီအစားမျက်နှာမှမကျြနှာကိုချိတ်ဆက်၏ ဒူဘိုင်းအတွက် HR ရှာဖွေစုဆောင်းချဉ်းကပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေအွန်လိုင်းဖိတ်ကြားချက်ကိုပေးပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်စာလိုင်းနိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူများအနည်းငယ်မြေပုံဆွဲသို့မဟုတ်တိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်ရှိရာအထူးထူးခြားတဲ့အရပ်ဌာနလည်းမရှိ, တစ်ဦးမေးလ်ပို့တံဆိပ်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ "သင်အဖြူရောင်စျေးဝယ်စင်တာလွန်သွားပြီးနောက်သူကအနီရောင်တံခါးကိုဘယ်ဘက်ကိုဒုတိယလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ": အခြားသူတွေအဘို့ထိုသူတို့ကဲ့သို့သောတစ်ဦးဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိကူညီနိုင်ရန်
MI4များအတွက်ဒူဘိုင်းမှတစ်ဆင့်တွမ် '' သင်္ဘော ''
အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်မပါဘဲသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှလစဉ်လတိုင်းပေးဆောင်ကာဆွဲဆောင်မှုလစာထဲကနေ။ သင်တို့သည်လည်းရသောအခါသင်သည်မည်သည့်ဝင်ငွေကနေမဆိုအပိုဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများသည်၌သင်တို့၏ငွေရှာ။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော Tom Cruise နဲ့ဖွင့်တဲ့သူအဖြစ်စူပါစတားတွေအများကြီးဆွဲဆောင် ဒူဘိုင်းထံသို့လာ။ အချိန်အလွန်တိုတောင်းသောငွေပမာဏကိုငွေကောင်းတစ်ခုငွေပမာဏ (အခွန်လွတ်ဒူဘိုင်းပိုက်ဆံ) ချွေတာ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူ။ မကောင်းတဲ့ site ကိုသင်တို့ကိုလည်းခဲဒူဘိုင်းအတွက်အောင်ကြောင်းဝင်ငွေအများကြီးဖြုန်းဖို့စူပါလွယ်ကူပါတယ်။
ဒူဘိုင်းရဲ့ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ရည်မှန်းချက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအဆက်မပြတ်အကြီးမားဆုံးနေရာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကုန်စည်ပြပွဲအရာအားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ရပါမည်။ ယူအေအီးဟိုတယ်များကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးဇိမ်ခံဖြစ်ကြသည်။ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအခြားမည်သည့်နေရာအရပ်ထက် သာ. ကောင်း၏။ ဒူဘိုင်းမြို့သည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ရှိပြီးသော Burj al-အာရပ်တို့ပါဝင်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အဆောက်အဦးများ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Burj Khalifa ကသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အံ့သြဖွယ်ဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်ထပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစုဆောင်းမှုတို့အတွက် No.1။ ဆက်ဆက်က The Burj Khalifa မျှော်စင်ကွယ်ပျောက်သင်မတ်တပ်ရပ်ရာအရပ်ကနေ 95 ကီလိုမီတာကနေတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, ဒူဘိုင်းစီးတီးဧရိယာအကြီးဆုံးမိုးလုံလေလုံကုန်တိုက်ရှိပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသူတို့လည်း GCC အတွက်အကြီးမားဆုံးငါးမွေးကန်ရှိသည်။ အစဉ်အဆက်လူ့ဖြင့်အကြီးမားဆုံးအလိုအလျောက်စမ်းရေတွင်း, ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဟိုတယ်, အဘူဒါဘီအတွက်အရှည်ဆုံး automated ရထားလမ်းကွန်ယက်ကို။ ဒူဘိုင်းစီးတီးစင်တာအတွင်းရှိအကြီးဆုံးကျော်ကြားမှုမိုးလုံလေလုံနှင်းလျှောစီးပန်းခြံ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘလော့ဂါဖြစ်လာဖြစ်လာနိုင်ပါသည် နှင့်အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းမြို့အကြောင်းကိုရေးပါ။
သငျသညျအစဉျအမွဲထို option ကိုရခဲ့လျှင် တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သွားရောက်လည်ပတ် သို့မဟုတ်ဤအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့မြို့သို့သွားရောက်ခရီးသွားကျေးဇူးပြုပြီးပဲကြည့်သွားပြီးရှိသည်! သငျသညျအာရပ်သို့မဟုတ်မမေတ္တာရှင်တက်အဆုံးသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူဘိုင်းတိုင်းလူတစ်ဦးအပေါ်တစ်မူထူးခြားသောစှဲချန်ထားမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အမြဲအလုပ်ရှာဖွေသူများအကြံပေး။ စိတ်၌ဤအတူသင်တို့သည်လည်းသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်းအလုပ် site ကို Naukri ပင်လယ်ကွေ့မှလူကြီးမင်း၏ CV ကို add.
ဒူဘိုင်းမြို့ အတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု 2019